kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Kia က Android 5.1 ကား DVD, Kia က Android 5.1.1 မော်တော်ကား DVD တရုတ်ဦးဆောင်ထောက်ပံ့
ဖေါ်ပြချက်:kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD,kia ကို Android 4.4 ကား DVD,kia ကို Android 5.1 ကား DVD,kia က Android 5.1.1 မော်တော်ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD
kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD, kia ကို Android 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, kia ကို Android 5.1 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
9 လက်မ android K3 / RIO 2012 လမ်းညွှန်ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CERATO / Fort 2018 အတွက်ကားဗီဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kia Carens 2013 အတွက်ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Murano ၂၀၁၅ အတွက် tesla android ကားလမ်းညွှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Seltos 2019 အတွက် android radio auto  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Sorento 2016 အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကားအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
KX3 2017 အတွက်2din head ယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android Multimedia System Sportage ၂၀၁၂  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နံနက် / Picanto 2016-2018 များအတွက်ကားသွားလာမှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kia Seltos 2019-2020 အတွက် Android ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kia Carnival 2019 အတွက် Android 9.0 ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kia K3 အတွက် Android 9inch ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
KIA CEED android ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Morning Picanto 2017 အတွက် dash navigation အတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
K3 RIO 2015 အတွက်နှစ်ဆ din ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
K5 OPTIMA 2015 အတွက်မော်တော်ယာဉ် DVD ဖျော်ဖြေရေးစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SORENTO 2015 အတွက် Android Carplay Head ယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Sportage 2010 အတွက် Klyde မော်တော်ယာဉ်ဌာနချုပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
K5 Optima 2015 အတွက် android ကားခေါင်းစီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cerato K3 Forte အတွက်2din android  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ceed 2019 ဘို့ octa-core ဟာ android ကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
9 လက်မ android K3 / RIO 2012 လမ်းညွှန်ရေဒီယို
Kia K3 / RIO 2012-2014 အတွက် Android9PX5 octa core head ၁။ K3 / RIO 2013 အတွက်ကားဗီဒီယိုဖွင့်စက်သည် GPS Navigation ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးဂူးဂဲလ်မြေပုံကိုကြိုတင်တပ်ဆင်သည် (အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံအချက်အလက်မပါဘဲ); USB Port / Micro SD ကဒ်အထိုင် (128GB အထိ)၊...
CERATO / Fort 2018 အတွက်ကားဗီဒီယို
Kia CERATO / FORTE 2018-2019 အတွက် Android 9.0 ကားသွားလာမှု Android 9.0 PX5 Octa Core2+ 16G /4+ 32G /4+ 64G 1. စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ KIA Cerato 2018 အတွက် 9inch...
Kia Carens 2013 အတွက်ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
KIA Carens 2013-2017 အတွက် Android9PX5 octa core head ၁) အရည်အသွေးမြင့် DSP သည်စက်ပစ္စည်း EQ များမှအသံအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ တက်ကြွဆူညံသံဖျက်သိမ်းခြင်း...
Murano ၂၀၁၅ အတွက် tesla android ကားလမ်းညွှန်
Nissan Murano 2015-2020 အတွက် Android9PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9Pie System၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ Octa Core နှင့် 32GB / 64GB ROM၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များလည်ပတ်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်သောမြန်နှုန်း။ ၂)...
Seltos 2019 အတွက် android radio auto
KIA Seltos 2019-2020 အတွက် Android9PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9Pie System၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ Octa Core & 32GB / 64GB ROM၊...
Sorento 2016 အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကားအသံ
2016 - Sorento အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကားအသံ Sorento car stereo dvd သည် 64GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့် USB flash drive, MP3 player & Micro SD ကဒ်ကိုထောက်ပံ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Android Car DVD ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Klyde သည်ရုရှား၊ တူရကီ၊ GCC...
KX3 2017 အတွက်2din head ယူနစ်
KX3 2014 - 2017 အတွက်2din head unit တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Android Car DVD ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Klyde သည်ရုရှား၊ တူရကီ၊ GCC နိုင်ငံများကဲ့သို့သောနိုင်ငံများစွာတွင်နာမည်ကောင်းရပါသည်။ ဤတွင် KX3 2014 - 2017 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအား ၂ din din...
Android Multimedia System Sportage ၂၀၁၂
Android Multimedia System Sportage ၂၀၁၀ - ၂၀၁၂ 1080p HD ဗွီဒီယိုကိုဒီကုတ်ဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန် 1280 × 720 အလွန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဘုံဗီဒီယိုအမျိုးအစားများကို MPEG1, MPEG2, H2.64,...
နံနက် / Picanto 2016-2018 များအတွက်ကားသွားလာမှု
Kia Morning / Picanto 2016-2018 အတွက် Android 9.0 ကားသွားလာမှု Android 9.0 PX5 Octa Core2+ 16G /4+ 32G /4+ 64G ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 Oreo စနစ်၊ 2GB / 4GB RAM၊ Octa Core နှင့် 16GB / 32GB / 64GB ROM ၏ Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
Kia Seltos 2019-2020 အတွက် Android ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
Kia Seltos 2019-2020 အတွက် Android ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM...
Kia Carnival 2019 အတွက် Android 9.0 ကားစတီရီယို
Kia K3 အတွက် Android 9inch ကားရေဒီယို
KIA CEED android ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်
Morning Picanto 2017 အတွက် dash navigation အတွက်
Morning Picanto 2017 အတွက် dash navigation အတွက် ၁။ Picanto အတွက် dash DVD player တွင်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှ Verna အတွက် oem car multimedia သို့ဖုန်းလက်ဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပြီးလက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Bluetooth-Enabled, Built-in GPS, CD...
K3 RIO 2015 အတွက်နှစ်ဆ din ရေဒီယို
K3 RIO 2015 အတွက်နှစ်ဆ din ရေဒီယို Klyde DAB + ရေဒီယိုအသံဖမ်းစက်နှင့်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော CD ကဲ့သို့သောအသံအရည်အသွေးဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဒီဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်သည့်ရေဒီယိုလိုင်းများကိုသင်ပိုမိုခံစားနိုင်သည်။ (မှတ်ချက် - Klyde DAB + box...
K5 OPTIMA 2015 အတွက်မော်တော်ယာဉ် DVD ဖျော်ဖြေရေးစနစ်
K5 OPTIMA 2015 အတွက်မော်တော်ယာဉ် DVD ဖျော်ဖြေရေးစနစ် Android 9.0 OS၊ ၁၀.၁ လက်မ Capacitive HD 1024x600 Mutil-touch မျက်နှာပြင် Octa-core 1.6GHz CPU၊ Samsung DDR3 4GB RAM၊ ၃၂ ဂစ် internal internal memory, တိုးချဲ့ထားသော media card / GPS card / USB 32...
SORENTO 2015 အတွက် Android Carplay Head ယူနစ်
SORENTO 2015 အတွက် Android Carplay Head ယူနစ် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောအင်္ဂါရပ်များသည် SORENTO android auto carplay head unit ကိုဂီတလုပ်ဆောင်မှု၊ ဂူဂဲလ်အသံရှာဖွေခြင်းစသည့်အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူလွယ်ကူစေရန်နှင့်အဆင်ပြေစေရန်ပြုလုပ်သည်။...
Sportage 2010 အတွက် Klyde မော်တော်ယာဉ်ဌာနချုပ်
Sportage 2010 အတွက် Klyde မော်တော်ယာဉ်ဌာနချုပ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Android Car DVD ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Klyde သည်ရုရှား၊ တူရကီ၊ GCC နိုင်ငံများကဲ့သို့သောနိုင်ငံများစွာတွင်နာမည်ကောင်းရထားပါသည်။ ဤတွင် Sportage...
K5 Optima 2015 အတွက် android ကားခေါင်းစီး
K5 Optima 2015 အတွက် android ကားခေါင်းစီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Android Car DVD ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Klyde သည်ရုရှား၊ တူရကီ၊ GCC နိုင်ငံများကဲ့သို့သောနိုင်ငံများစွာတွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်။ ဤတွင် K5 Optima 2015...
Cerato K3 Forte အတွက်2din android
Cerato K3 Forte အတွက်2din android Cerato K3 Forte အတွက်2din android သည် OBD အမှားကုဒ်များ၊ ကားစွမ်းဆောင်ရည်၊ အာရုံခံအချက်အလက်များနှင့်အချိန်နှင့်အမျှရရှိနိုင်စေရန်အတွက် Torque အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူသုံးထားသော Bluetooth OBD2...
ceed 2019 ဘို့ octa-core ဟာ android ကားတစ်စီးရေဒီယို
ceed 2019 ဘို့ကို Android 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်းမာလ်တီမီဒီယာကစားသမားမျက်နှာပြင် 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်ပါ: - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ - ceed 2019 မော်ဒယ် 1. ကို Android 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း။...
တရုတ်နိုင်ငံ kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
1. Kia က Android 6.0 ကား DVD, ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကားတစ်စီး DVD, အသစ်လွင်ဆုံးဟာ android 6.0 စနစ်က: android 6.0 ၏ optimized မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှတဆင့်များနှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်စွမ်းရည်။ စွမ်းဆောင်ရည်၏ system ကိုမကြုံစဖူးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှုအဆင့်အထိယူဆောင်ခဲ့သည်။
2.Kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Bulit-in ကို WIFI ဟော့စပေါ့မျှဝေ: သင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကို browser ကိုအင်တာနက်, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ watch, သင်၏မေးလ်စစ်ဆေးအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူဂိမ်းကို download apps များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အညွှန်းကစား။ kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Permium cota-Core CPU ကိုအလင်းရောင်အစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှု: စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်း android ခေါင်းကိုယူနစ်, အစာရှောင်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်, effciently, ရိုးရှင်းသော multitasking ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာ
3.Kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဤအကားတစ်စီးကို install နိုင်သည်
SPORTAGE 2016 / SPORTAGE 2010-2012 / Mohave အဘိဓါန် / Borrego 2008-2010 / Carens 2013 / နံနက် / Picanto 2014 / CEED 2014 / Sorento 2015 / Sorento 2013 / Sorento, 2011 / Cerato / K3 / Fort 2013-2014 / 2014 အသက်ကို / အသက်ကို 2012- 2013 / Cerato / Fort 2008-2012 / Fort / Fort 2008-2011 / K2 / ရီယို 2011-2012 / K3 / ရီယို 2015 / K5 / OPTIMA 2015 / K5 / OPTIMA 2014 / Cerato2003-2008 / Sportage 2004-2010 / CEED2006-2009 / Sorento2002-2009 / Spectra2004-2009 / Optima2005-2010 / Rondo2006-2011 / Rio2005-2011 / Sedona2006-2011 / Carens2006-2011
kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD kia ကို Android 4.4 ကား DVD kia ကို Android 5.1 ကား DVD kia က Android 5.1.1 မော်တော်ကား DVD Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD